Tunio Zafer si Martech Zone
Edemede site na Tunio Zafer
Tunio Zafer bụ CEO nke pCloud AG - ụlọ ọrụ ahụ na-emepe ma na-enye ikpo okwu nchekwa pCloud. O nwere ihe karịrị afọ 18 nke njikwa na ahịa ahịa na ngalaba nke teknụzụ, ma sonye n'ọtụtụ ọrụ azụmaahịa gara nke ọma dịka MTelekom, Host.bg, Grabo.bg, Mobile Innovations JSC na ndị ọzọ. Dịka onye ndu na onye njikwa nke ụlọ ọrụ nchekwa igwe ojii, Tunio na-akwalite ihe ọhụrụ na mpaghara dịka nchekwa na ịba uru iji kwụsị ndị ọrụ. Tunio na-agba ume-iche echiche n'ihu ndị otu ya, na-arụ ọrụ iji nwee mmetụta dị ukwuu na ahịa IT na-eto n'ike n'ike, maka ndị mmadụ n'otu n'otu na azụmahịa.
Nnyocha nke ndị na-ere ahịa na ndị isi ụlọ ọrụ n'oge ọkọchị chọpụtara na naanị pasent ise achọtaghị ihe ọ bụla dị mma maka ndụ mkpọchi - ọ bụghị otu onye kwuru na ha dara ịm ụta ihe n'oge ahụ. Site na ichota ichoro ahia maka ahia ahia mgbe opupu ihe opupu, odi kwa ya. Maka xPlora, ụlọ ọrụ na-ere ahịa na dijitalụ nke dabeere na Sofia, Bulgaria, ikike ịkekọrịta faịlụ mmebe